Netizen Report: Natsahatra ny Fifandraisana amin’ny Alalan’ny Aterineto ao Bangladesh sy i Etiopía Kanefa Mihamafana ny Toe-draharaha Politika · Global Voices teny Malagasy
Nandika (es) i Sonia Ordóñez
Voadika ny 20 Septambra 2016 5:06 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, русский, English
Hetsi-panoherana iray ao Oromia, faritr'i Etiopia. Sary avy amin'ny pejy Facebook an'i Abdia Lemesse. Sary nahazoana alalàna
Manome topimaso iraisam-pirenena amin'ireo olana, sy fandresena ary ny fironana vaovao mikasika ny lalàna mifehy ny aterineto manerantany ny Netizen Report ato amin'ny Global Voices Advocacy
Sahirana ireo mpisera aterineto tany Bangladesh noho ny fahatapahan’ny herinaratra matetika sy ny fanakatonana tranonkala maromaro, izay nofaritan’ny ny vaomiera mpandrindra ny serasera ho fampiharana ny sivana napetraky ny governemanta. Hatramin'ny fiandohan'ny volana Aogositra teo, 35 ireo tranonkalam-baovao notapahin’ny manam-pahefana noho ny fanehoany tsikera mikasika ny toe-draharaha ara-politika misy ao amin'ny firenena.
Araka an’i Zara Rahman, avy ato amin’ny Global Voices, miezaka mamantatra ny olom-pirenena ny amin’izay mety ho fiantraikany tsara aterak'ireo fanapahana ireo amin’ny fandriampahalemana, ao amin’ny firenena izay miha tandindomin-doza ny fahalalahana maneho hevitra .
Tapaka ihany koa ny aterineto tao Etiopia raha mitohy ny hetsi-panoherana ao amin'ny faritr'i Oromia sy Amhara, izay anjakan’ny herisetra. Manodidina ny 100 ny mpanao fihetsiketsehana maty tamin’ny tifitra nataon’ny mpitandro filaminana tamin'ny bala tena izy tamin'ny ny 6 Aogositra teo. Ny fanandramana nataon'ny Fanarahamaso Ara-tambajotra Misokatra ho an'ny Rehetra—-(Open Observatory of Network Interference OONI, araka ny fanafohezan-teny amin'ny teny anglisy) no nanamafy fa tapaka ny aterineto nandritra izany fotoana izany, na dia mbola tsy fantatra mazava raha nanerana ny faritra rehetra no nitranga izany fahatapahana izany sy ny karazan-tambajotra niharany ao amin'ny firenena.
Lasa fitaovana manan-danja ho fanaparitahana vaovao mikasika ny hetsika ataon’ireo mpanao fihetsiketsehana ny aterineto ao Oromia. Manohitra ny tetikasa hanitarana ny renivohitra Addis Abeba any amin’ireo faritra mamokatra ireo mpitolona ireo, hetsika mety mitaky fifindrà-monin'ny tantsaha an'arivony eo an-toerana . Nanao fanahy iniana mandiso vaovao na tsy namoaka io toe-draharaha io avokoa ny haino aman-jerim-panjakana rehetra hifehezana ny fanoherana tany Oromia. Nanakana ireo sehatra media sosialy rehetra [mg] ny EthioTelcom, orinasam-pifandraisandavitra manana ny ampihimamba manokana amin'io sehatra io, ka anisan'ireo voasakana ny Twitter, ny Facebook ,ny WhatsApp ary ny Facebook Messenger.
Ao Colombia, ny fizarana fotsiny dia mety ho heloka bevava
Mpianatra Kolombiana manana diplaoma iray antsoina hoe Diego Gomez no niatrika fiampangana heloka be vava noho ny nanitsakitsahany ny zon'ny mpamorona amin'ny alalan'ny fizarana asa-karoka tamin'ny aterineto, hivoaka tsy ho ela ny didim-pitsarana azy. Mba ho fanohanana ny raharaha Gomez, dia nanomboka namoaka ny tenirohy Twitter #CompartirNoEsDelito izay midika hoe “tsy heloka bevava ny fizarana” ny ONG Kolombiana Orina Mpanasoa Karisma Misahana ny Zo Nomerika. Ao Kolombia, ny mandika sy mizara asa tsy nahazoana alalana avy amin’ny mpamorona azy dia mety mitarika sazy hatramin'ny valo taona an-tranomaizina.
Nividy fitaovana fanaraha-maso mitentina an-tapitrisany dolara i Però
Mitentina 22 tapitrisa dolara ny fitaovana fanaraha-maso novidian’i Però mba hanaraha-maso ny fifandraisana ataon’ireo olom-pirenena ao aminy, araka ny vaovao navoakan'ny Associated Press. Misy antontan-taratasim-panjakana milaza fa io “Tetikasa Pisco” (anarana izay manondro toaka Peroviana malaza) io dia afahan’ny governemanta misintona ireo antso, hafatra an-tsoratra, karajia ary diantongotry ny nodiavina tao anaty aterineto eny an-tenantenan-dalana. Afaka manara-maso olona 5.000 sy mandrakitra resak'olona 300 miara-miresaka io fitaovana io .
Nanome alalana amin'ny fividianana ny SkyLock, fitaovana izay manome alalana an'ny manampahefana hitady sy hitsongo dia telefaonina ao amin'ny firenena, ihany koa ny sampan-draharahan'ny fitsikilovana ao Però. Ireo fitaovana ara- teknika ireo dia novidiana tamin’ilay Orinasa Isiraeliana-Etazonia Verint, izay manana orinasa any Brezila, Colombia, Ekoadaoro ary Meksika.
Fiampangana Heloka bevava sy ny media sosialy any Iran
Miandry ny didim-pitsarana amin'ny raharaha nentin'ny fanjakana Iraniana hiampangana azy i Najibeh Salehzadeh, vadina mpikatroka sendikalista mafana fo iray. Voampanga ho “manevateva” ny Mpitarika Faratampony ao Iran izy ka nampidi-doza ny fiarovam-pirenena tamin'ny fandefasana votoaty iray nataony tao amin'ny Facebook tamin'ny fiandohan'ny volana Jona teo. Nandà ny fiampangana azy anefa i Salehzadeh ka nanambara fa tsy manana kaonty ao amin'io tambajotra sosialy io akory izy, izay voarara any Iran. Mino ny mpiaro ny zon'ny olombelona fa nisy zavatra noforonina tao amin'io raharaha io mba hampitahorana ny vadiny, Mahmoud Salehi, izay mpikatroka sendikalista malaza, izay efa nosamborina sy nogadraina imbetsaka tao Iran noho ny fandraisany anjara tamina hetsi-panoherana milamina maro.
Araka ny fanambarana nataon’i Gerdab, Sampana an-tseraseran'ny Mpiambina Revolisionera Iranianina, dia nampiantso, nitazona ary nampitandrina mpitantana ny haino aman-jery sosialy maherin'ny 450 ny fanjakana tao anatin'ny herinandro maromaro izay. Ampahany amin'ny hery famoretana izay nanomboka nataon’ireo manampahefana tamin'ny volana Martsa 2015 ka nantsoin’i Gerdab hoe “Ankaboot” (“Hala”) izany mba afahan’ny fanjakana manara-maso bebe kokoa ny tambajotra sosialy sy mba hampitsaharana ireo hetsika tsy mendrika.
Mpanao gazety miatrika raharaha teo anivon'ny fitsarana, tamin'ny famoahana raharaham-panondranana ankizy any India
Lasibatry ny fanadihadian'ny polisy sy ny fanararaotana amin'ny aterineto ankehitriny ireo Indianina mpanao gazety namoaka porofo fa ny fikambanana haindò elatra havanana Rashtriya Swayemsevak Sangh (RSS) dia tafiditra amin'ny raharaha fanondranana ankizy. Nitatitra ny fanadihadiana navoakan'ny tranonkalam-baovao Outlook, mitondra ny lohateny hoe Bemidina #BabyLift [MibataZaza] fa efa nandika ny lalàna Indiana sy ny lalàna iraisampirenena ny RSS ary efa nanondrana zazavavin'ny foko [hafa] miisa 31, izay eo anelanelan'ny telo katramin’ny iraika ambin'ny folo taona ao anatin'ny fikendrena ny “hanaovana azy ireo ho Haindò”.
Nametraka fitoriana heloka bevava an'i Krishna Prasad, tonian-dahatsoratry ny Outlook, an'i Neha Dixity, mpanao gazety, ary an'i Indranil Roy, toniam-pamoaham-baovaon'ny Outlook ny lefitry, ho manao fitarihana fankahalàna foko isan-karazany, ny lehiben'ny fampanoavana iray sy ny mpitondratenin'ny antoko nasionalista Hindu Bharatiya Janata, izay sampana ara-politikan'ny RSS. Efa noroahina i Prasad hatramin'ny nisian'ny raharaha. Manahy ny mpanao gazety sy ireo mpanandra-tenin'ny fahalalahana miteny fa tranga mety hitarika amin'ny fanivanan-tena bebe kokoa any India io raharaha io.
Neken'ny Mpanao lalàna Pakistaney ny volavolan-dalàna mikasika ny heloka an tserasera
Nandany ilay volavolan-dalàna mikasika ny heloka an tserasera izay nitereaka resa-be, izay hosoniavin'ny Filoha Mamnoon Hussain tsy ho ela ny Antenimieram-pirenena ao Pakistan. Notsikeraina noho ny famerana ny fahalalaham-pitenenana sy ny fahazoam-baovao, ary heverina ampiasain'ny manampahefana tsy araka ny tokony ho izy, Ilay volavolan-dalana Fisorohana ny Heloka Bavava An-tserasera araka ny hevitr'i Naveed Qamar, mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena
Fiarovana anaty fanjavozavoana? Mandrisika ny sivana hiarovana ny ankizy i Paragoay
Eo am-pandinihana ao Paragoay amin'izao fotoana izao ny volavolan-dalàna antsoina hoe “Amin'ny fiarovana ny kilonga sy ny tanora manoloana ireo votoaty mampidi-doza ao amin'ny aterineto,” izay kasaina hametrahana sivana hanakanana ireo votoaty heverina ho “mampidi-doza” ny tanora ao amin'ny tambajotra aterineto azon'ny rehetra idirana. Mety hiafara amin'ny fitomboan'ny sivana sy ny fahasarotan'ny fidiran'ny olon-dehibe amin'ireo fitaovana mifanaraka amin'ny taonany ao amin'ny aterineto izany, ka efa be ireo tsikera noho ireo fiantraikany eo amin'ny fahalalahana maneho hevitra ao Paragoay. Efa nankatoavin'ny Kongresy ao Paragoay io volavolan-dalàna io ary efa miandry ny sonian'ny filoha, na dia mbola afaka ny mametraka vato tsy azo ivalozana araka ny lalàna ao Paragoay aza ny filoha.
Ny fahalalahana maneho hevitra ao amin'ny vanim-potoana ny fanatontoloana – Columbia University
Fandrahonana an'i Iran: iran sy ny software handeha amin'ny alalan'ny Internet - Claudio Guarnieri, Collin Anderson
Misorata anarana hanarahanao ny Netizen Report
amin'ny alalan'ny mailaka
Nandray anjara tamin'ny fanatontosana ity andiany ity i Mahsa Alimardani, Ellery Roberts Biddle, Elizabeth Rivera, L. Finch ary i Sarah Myers West.
19 Marsa 2021Azia Atsimo
07 Desambra 2020Azia Atsimo